JUBBALAND: Guddiga Doorashooyinka oo u debcey cadaadiskii la saaray | Hadalsame Media
Home Wararka JUBBALAND: Guddiga Doorashooyinka oo u debcey cadaadiskii la saaray
JUBBALAND: Guddiga Doorashooyinka oo u debcey cadaadiskii la saaray
(Kismaayo) 17 Agoosto 2019 – Maamulka Jubbaland ayaa la sheegay inuu iminka u debcey cadaadiska la saaray iyadoo lagu warramayo inay ogolaadeen in la debciyo xeerarka doorashada, si ay musharrixiin badani isu diiwaan geliyaan. Halkan ka akhri…
Wararka ayaa sheegaya in JIBIEC ay haatan u debceen cadaadiska QM, Midowga Afrika iyo IGAD oo halkaa dhowr mar horay u tegey.
Ujeedka ugu wayni wuxuu ahaa in doorashada dib loo dhigo si ay u noqoto mid laga soo wada qayb geli karo, iyadoo Axmed Madoobe loo sheegay inaysan soconaynin qaabka uu wax ku wadey oo ah inuu sameeyo qaab uu kusoo noqon karo.
Haatan, musharrixiintii horay loogu sheegay inay is diiwaan gelintu ”ka buuxsantey” 26-kii Luulyo, ayaa iminka loogu daray 3 cisho oo dheeraad ah, si ay galalkooda ugu gudbiyaan Guddiga Doorashooyinka iyo Xuduudaha (JBIEC).
Beesha Caalamka ayaa maalin dhowayd sheegay in haddii aan muranka jira la xallin ay dhali karto qalalaase ka dhasha gobolkaasi, sidoo kale DF Somalia ayaa sheegtay inaysan aqoonsan doonin wixii kasoo baxa doorashadii hore ee uu garwadeenka ka ahaa Axmed Madoobe.
Previous articleGobol Hindiya ku yaalla oo ay ka jiraan dowlado iska horjeeda, canshuuro baad ahna dadka laga qaado!! (Calamada Somalia-Itoobiya?!!)
Next articleIlhaan Cumar oo Israel ku mitaashey midab-takoorkii South Africa (Dhaliil uga imanaysa dhanka Soomaalida)